साचर केक - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
सच्चर केक हाम्रो एक हो मनपर्ने केक। बाट बनेको छ चकलेट केक खुबैरो जामले भरिएको र चकलेटले ढाकिएको। संयोजन यति धनी छ कि दुबै वयस्क र बच्चाहरूलाई यो मन पर्छ।
म सामान्यतया प्रयोग गर्दछु खुबानी जाम घरेलुजुन मैले ग्रीष्म makeतुमा बनाउँदछु र यसलाई केहि महिनासम्म राख्दछु, र यसले यसलाई प्रेमले बनेको चीजहरूको अतिरिक्त बिट दिन्छ।
यो साचर केकलाई थोरै ह्वाप्ड क्रीम र सिरपमा केही चेरीले सजावट गर्न सकिन्छ, तर केवल चकलेट कोटिंग पर्याप्त छ, विशेष गरी यदि तपाईं यसको अधिकमा आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने। प्रामाणिक स्वाद
1 सच्चर केक
चकलेट प्रेमीहरूको लागि केक।
सिरप को लागी:
१/२ वेनिला बीन
Eggs अण्डाहरू (हामी सेतोलाई योकबाट अलग गर्दछौं)
G० g + १ g० ग्राम चिनी
200 चकलेट fondant को छ
वैकल्पिक: g० g कोग्नाक
खुबानी को १ जार g०० g
150 चकलेट fondant को छ
हामीले सिसा र पानीमा चिनी, पानी र १/२ वेनिला बीन राख्यौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान र गति 9।
समय पछि, हामी हटाउँछौं र शान्त हुन्छौं।
हामी ओभनलाई १º०º मा गरम गर्छौं। लगभग २२-२180 सेन्टीमिटरको गोल मोल्ड रिलिज मोल्डलाई ग्रीस गर्नुहोस्, थोरै माखन र ग्रीसप्रुफ कागज राख्नुहोस्।
सिसा नधोईकन हामी पुतलीलाई ब्लेडमा राख्छौं र egg अण्डाको सेतो, sugar० ग्राम चिनी र एक चुटकी नुन थप्दछौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, गति २। हामी ठूलो भाँडामा रिजर्भ गर्दछौं।
गिलास नधोईकन, हामी पुतली हटाउँछौं, चकलेट थप्छौं र यसलाई चप्न लगाउँदछौं २० सेकेन्ड, गति 5--5-। मा।
हामी माखन र बाँकी चिनी थप्दछौं। हामी प्रोग्राम १० मिनेट, तापक्रम १००º र गति।। हामी जाँच गर्दछौं कि चकलेट राम्रोसँग पग्लियो र हामी भित्ताहरू र सिसाको ढक्काहरूमा बाँधिएका थियौं। यदि चकलेट राम्रोसँग पग्लिएन भने हामी सँगै बढि मिनेट कार्यक्रम गर्दछौं समान तापमान र गतिमा।
हामी प्रोग्राम गति 4, कुनै तापमान र समय छैन र हामी egg वटा अण्डाको बोकाहरू मुखमा खसाल्दैछौं, एक एक गरेर, केहि सेकेन्ड राम्रोसँग समाहित गर्न।
हामी कोग्नाक (वैकल्पिक) पनि थप्छौं र केही थप सेकेन्डको लागि मिक्स गर्दछौं।
हामी पीठो र खमीर थप्छौं। हामी प्रोग्राम १० सेकेन्ड, गति १ १/२। हामी spatula साथ लपेट्न समाप्त।
हामी यो मिक्स को लागि आरक्षित आरक्षित गोरा जोड्यौं। हामी तिनीहरूलाई हावामा मिल्ने आन्दोलनको साथ मिलाउँदछौं।
हामी मोल्डमा मिश्रण खन्याउँदछौं र १º०º मा minutes 45 मिनेटमा बेक गर्दछौं। यसलाई हटाउनु अघि, हामी यसलाई टूथपिकले चुच्छौं र यदि यो सुख्खा बाहिर आयो भने यो भइसक्यो।
हटाउनुहोस् र र्याकमा चिसो दिनुहोस्।
गिलास सफा र सुक्खा संग, हामी गिलास मा चकलेट fondant राख्दछौं र यसको दौरान काट्नु पर्छ Seconds० सेकेन्ड, गति 20--5-१०। हामी भित्ताहरू र पर्खालमा र शीशाको ढक्काहरूमा, ब्लेड तर्फ कम गर्छौं।
हामी पानी र कार्यक्रम थप्छौं १० मिनेट, तापक्रम १००º र गति।।
हामी माखन र प्रोग्राम थप्छौं १० मिनेट, तापक्रम १००º र गति।। हामी जाँच गर्दछौं कि मिश्रण एकसमान छ।
केक को असेंब्ली को लागी:
हामी केकलाई दुई भागमा विभाजन गर्दछौं। हामी तल तह सिरपको साथ फैलाउँदछौं र हामीलाई सिलिकॉन ब्रशको साथ मद्दत गर्दै।
खुबानी जाम को एक तह संग शीर्ष (लगभग आधा भाँडो)।
हामी केकको अर्को आधा भाग सिरपको साथ फैलाउँदछौं र यसलाई सावधानीपूर्वक पहिलो लेयरको माथि राख्छौं।
हामी जामको बाँकी भाग पछिल्लो तहको शीर्ष र छेउमा खसाल्छौं।
केक वरिपरि हामी अल्युमिनियम पन्नीका केही टुक्राहरू राख्छौं वा यसलाई र्याकमा राख्छौं र माथि टोपि pour्ग खसाल्छौं।
हामीले यसलाई सम्पूर्ण सतह र छेउमा राम्रोसँग फैलाउँदछौं, जब सम्म यो पूर्ण रूपमा आउँदैन।
हामी कभरेजलाई चिसो र फ्रिजमा राख्छौं। एक सानो whipped क्रीम र सिरप मा केहि चेरी संग सजावट।
थप जानकारी - खुबानी जाम
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Huevos, १ घण्टा भन्दा कम, पेस्ट्री
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » पेस्ट्री » सच्चर केक
उत्कृष्ट। कुल सफलता, बधाई छ
म धेरै खुसी छु, मारिया। शुभकामना।
नमस्ते, म सासर केक बनाउन चाहन्छु, तर मलाई थाहा छैन १/२ भनिला बीन के हो र यदि खुबानीको सट्टामा म अर्को स्वादको अर्को जाम थप्न सक्छु।
नमस्ते मारी कारमेन, सबै ठूला सुपरमार्केटमा भनिला गेडाहरू छन्। यो दुई आउँदछ, तर तपाईं यसलाई एक चम्मच भेनिला सारको लागि बदल्न सक्नुहुन्छ।
जामको सन्दर्भमा, तपाईं सबैभन्दा अधिक मनपर्दो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। रास्पबेरी जामको साथ यो स्वादिष्ट छ। तपाइँ मलाई भन्नुहोस् कि तपाइँ यो कसरी गर्नुहुन्छ र यदि तपाइँलाई यो मनपर्दछ। शुभकामना।
नमस्ते मैले उत्तम केक बनाएँ जुन यो मैले सफल बनाएको थिएँ स्ट्रबबेरी जामले बनाएको हो यो मैले बनाएको उत्तम केकमध्ये एक हो।
म धेरै खुसी छु, मारी कारमेन। यो एक धेरै स्वादिष्ट केक हो, मलाई यो मन पर्छ। शुभकामना।
मार गाल्भेज भन्यो
म क्रिसमसको लागि यो केक बनाउन चाहन्छु, तर म काम गर्छु र मसँग समय छैन।
के म यस हप्तामा यो बनाउन र यसलाई स्थिर गर्न सक्छु?
तपाईं मलाई अभिवादन भन्नुहुनेछ।
मार् गोल्भेजलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मार्च, हो तपाई यसलाई स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले यसलाई केहि घण्टा पहिले लिनुभयो र यो स्वादिष्ट हुनेछ। शुभकामना।
नमस्कार इलेना, मैले यो देखेको छु कि तपाईं वेनिला बीनको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र म तपाईंलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। म Pannacotta बनाउँदैछु र मैले पढेको छु कि एकपटक पोड प्रयोग गरेपछि यसलाई राम्रोसँग सुकाउन सकिन्छ: या त अर्को समय सम्म बचत गर्नुहोस् वा भेनिला चिनी प्राप्त गर्न चिनीमा राख्नुहोस्। के तपाईलाई यस बारे केही थाहा छ? अर्कोतर्फ म एक साच बनाउन चाहान्छु, तर मलाई थाहा छैन यदि स्वादिष्ट चकलेट केक (जुन चकलेटले तपाईंको मृत्यु जस्तो हो) वा तपाईंको कोला केक (जुन मैले अहिलेसम्म बनाएको छैन) वा यहाँ सम्म कि चकलेट रातो रक्सीको साथ (जुन मैले आज बनाएको छु र यो शानदार छ)। तपाईंले यहाँ प्रकाशित गर्नुभएको एउटा सानो जागिर देख्दछु, तर यदि यो लायक छ भने, म यो गर्छु, ए? तपाईको सहयोगका लागि धन्यबाद।
नमस्ते एम। लुइसा, म तिनीहरूलाई भनिला चिनी बनाउन प्रयोग गर्दछु। मैले Thermomix मा चिनी र भनिला बीन राख्छ र प्रगतिशील गति 20--5-१० मा लगभग २० सेकेन्डको लागि यसलाई चलाउँछु। मलाई केक आफैं मन पर्छ, चकलेट डेथ ब्राउनिको लायक छैन किनकि यो एकदम कम्प्याक्ट छ। केक नुस्खामा एउटा प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, किनकि यो एकदम स्वादिष्ट छ। शुभकामना।
नमस्कार एलेना, म तपाईंको फोरममा नयाँ छु किनकि क्रिसमसदेखि मेरो थर्मोमिक्स छ। म सासर केक बनाउन चाहेको थिएँ र यस्तो देखिन्छ कि यो एकदम राम्रोसँग सकिएको छ, मसँग फ्रिजमा छ, तर मलाई मात्र शंका लागेको कुरा शुरूमा थियो। म स्वीकार गर्दछु कि म एक नौसिखिया हुँ, जसले निम्न गल्ती गरेको छ। पहिले तपाईंले पुतली राख्नुपर्नेछ र त्यसपछि तपाईंले स indicate्केत गर्नुहुनेछ कि तपाईंले सिसा धुनु पर्छ र चकलेट काट्नु पर्छ। ठीक छ, म दोहोर्याउँछु, म एक नौसिखिए हुँ र ...। चकलेट काट्ने काम गरेन। होईन, मलाई थाहा थिएन कि पुतली हटाउनुपर्‍यो। त्यसो भए, अर्को चरणहरूमा मलाई थाहा भएन कि यो पुतली हुन वा छैन भनेर। खैर, अन्तमा मैले यो बिना जारी राख्नको लागि छनौट गरेको छु र यो मेरो लागि राम्रो भएको छ। हाहाहा, मैले पहिले नै भनेको छु, ह्याजिंग। मैले यस ब्ल्गका लागि तपाईलाई धन्यबाद दिनु पर्दछ किनकि यसले मलाई ठूलो सहयोग पुर्‍याएको छ र म तपाइँ दुबैलाई फर्काउँछु। दुई मा बधाई छ र तपाईंको काम मा बधाई हो।
हाय एनी, तपाईंले यो सही गर्नुभयो, अर्को चरणहरू पुतली भन्दा बाहेक छन् (म यसलाई नुस्खामा राख्नेछु)। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ। अभिवादन र धेरै धेरै धन्यबाद तपाईले हामीलाई हेर्नु भयो।
इसाबेल रामरेज हेरेरो भन्यो
नमस्कार, म भोली केक बनाउदैछु र मलाई निम्न शंका रहेको छ: जब तपाईले भन्छ कि जामको आधा भाग दोस्रो केकमा मिल्छ, म बुझ्छु कि यो केकको माथिल्लो ढक्कनमा छ र यसमा चकलेट खन्याउनुहोस्। कृपया मलाई जतिसक्दो चाँडो जवाफ दिनुहोस्। तपाईको ब्लगमा बधाई छ, तपाईलाई थाहा छ हरेक बिहान म यो हेर्छु यदि तपाईले नयाँ नुस्खा पोस्ट गर्नु भएको छ भने अभिवादन
इसाबेल रामरेज हेरेरोलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते इसाबेल, यो सहि छ। यो चकलेट कोटिंग अन्तर्गत हुनु पर्छ। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ। अभिवादन र हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
नमस्कार, जाम कहाँ फैलाउने भन्ने मेरो शंका बारे स्पष्ट भएपछि, मैले केक बनाएँ र म मात्र भन्न सक्दछु कि यो स्प्यास्टेकुलर हो, मलाई झट्टै जवाफ दिएर धेरै धेरै धन्यवाद। बधाई छ।
म धेरै खुसी छु, इजाबेल!
नमस्ते! मैले मेरी छोरीको th औं जन्मदिनको लागि साकर केकको लागि इन्टरनेट खोजी गरें। मैले देखे कि तपाईसँग यो तपाईको ब्लगमा छ, मैले यस बारे अब सोचें, किनकि तपाईका व्यंजनहरु पक्का सफलता हुन्। र त्यसो भएको छ! हामी of जनाले गत रात यो काम गर्‍यौं र हामीलाई यो मनपर्‍यो!
मैले फेरि यस्तै प्रकारको बनाएँ, तर यो सुक्खा थियो, र तथ्य यो हो कि यसलाई सिरपले इम्पेर्गेनेन्ट गरेकोले त्यसलाई विशेषता स्वाद र केकको बनावट दिएको छ ...
म खुशी छु, ईवा! शुभकामना।
हेल्लो केटीहरु !! तपाईंको व्यञ्जनहरु को लागी साँच्चै आभारी। म थर्मोमिक्समा नयाँ छु, यद्यपि मैले क्रिसमसदेखि पाएको छु, मेरो क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको कमजोर समर्थनका कारण मैले अहिलेसम्म पहिलो आधारभूत थर्मो कक्षामा उपस्थित हुने अवसर पाएको छैन। मैले यसलाई ठूलो उत्साहका साथ किनेको थिएँ, केवल टिप्पणी गर्नका लागि कि प्रस्तुतकर्ताले मेरो थर्मोसँग प्रदर्शन गरिसकेका थिए र मेसिन त्यही क्षणमा घरमै बस्यो। म केहि हदसम्म deflated छु, म यसलाई थोरै प्रयोग गर्छु र पुस्तकको शीर्षमा «आवश्यक» म यसलाई विश्वास गर्दैन। मैले तपाईलाई भेट्टाएँ र मलाई उल्टो चिनी र केहि अन्य चीजहरू तयार गर्न प्रोत्साहित गरियो। ठिक छ म बिषयमा जान्छु, आज मैले Sacher केक बनाएको छु र सत्य कुरा राम्रो छ। एउटै कुरा के हो कि मलाई थाहा छैन कि म अलिकति विषालु भएको छु वा यो यस्तै बाहिर आउँछ। धन्यवाद, गालीको लागि माफ गर्नुहोस्।
नमस्ते तेरे, हामी धेरै खुशी छौं कि तपाईलाई हाम्रो ब्लग मन परेको छ र मलाई आशा छ कि यसले तपाइँलाई थर्मोमिक्स अधिक प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ। सच्चर केकको सम्बन्धमा, यो स्पन्ज केक हो, यो फ्लफी हुनु पर्छ। यदि यो सिरप संग अधिक कम्प्याक्ट गरिएको छ, यो धेरै रसिलो हुनेछ। शुभकामना।
द्रुत जवाफ लागि धन्यवाद एलेना। मैले olºº मा चिनीको साथ चिलो बनाए, तर उनीहरूलाई पुतलीसँग minutes मिनेट ब्ल्यान्च गरे ... अन्डा गोरा पनि छुट्टै। मैले पिठो मुछिएको, मैले २०% उल्टो चिनी प्रयोग गरें, म यसलाई पकाउनु भन्दा पहिले थोरै आराम गर्न दिन्थें ... ओभनमा मैले यसलाई १º०he सम्म पुर्‍याएँ र २२-२37 सेन्टीमिटरको मोल्ड राखें मैले पहिले तल्लोबाट तातो मात्र प्रयोग गरें। पहिलो मिनेट, त्यसपछि जब यो पहिले देखि नै बढ्दै थियो, मैले माथिबाट तातो राखें। अन्त्यमा, मैले तापक्रम अलि कम गरें किनकि यो केन्द्रबाट अलि बढेको थियो र अन्त्यमा यो ओभन घण्टा थियो। मैले ओभनको ढोका खोलेँ र केही मिनेट को लागी भित्र छोडिदिएँ, जब यसलाई बाहिर निकाले पछि म यसलाई अनमोल्ट गर्छु र यसलाई ओभन र्याकमा चिसो राख्न दिन्छु। पहिले नै चिसो, मैले यसलाई फ्रिजमा राखियो फ्रिज गरिएको झोलामा, जहाँ यसले रात बिताएको छ। बिहान मैले यसलाई तीन तहमा खोलेको छु, ती सबैले सिरप र खुबानी जाममा डुबायो, त्यसपछि कोटिंग र सजावटको लागि तयार छ, सँधै फ्रिज भित्र। कुल एक currada। फ्रिजमा रातको समयमा उही नै छिनिएको थियो, त्यसैले यो अपेक्षित रूपमा शान्त थिएन। यदि तपाईं मलाई मेगा स्पन्जी केक सल्लाह दिनुहुन्छ भने, म यसको मूल्यांकन गर्दछु, साथै एक नुस्खाको साथ यो सफल हुन्छ। फेरी धन्यबाद र टिराडेको लागि माफ गर्नुहोस्।
हेलो तेरे, तपाई कोला-काओ केक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, यो एकदम फुल्को छ। तपाईं कसरी मलाई बताउनुहुन्छ। शुभकामना।
नमस्कार एलेना !! यो सप्ताहअन्तमा मैले चिज केक, मस्कार्पोन चीज पनी र यो केक बनाएको छु र यो साँच्चिकै राम्रो छ !! मैले यसलाई स्ट्रबेरी जामको साथ बनाईएको थिएँ र यसलाई सजाउनका लागि मार्जिपन टाँस्दा तपाईले मलाई पठाउनु भएको थियो। यो कोग्नाकसँग धनी हुने थियो तर यो मेरो छोराको जन्मदिनको लागि हो, अर्को पटक म यसलाई जस्तो बनाउँछु। अभिवादन र धेरै धेरै धन्यवाद !!!
मलाई खुशी छ कि तपाईंले तिनीहरूलाई मन पराउनुभयो, मिला! शुभकामना।
नमस्कार इलेना, म तपाईंलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, के तपाईं मिल्क चकलेटको लागि डार्क चकलेट परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ?
हो यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर यो धेरै स्मूद छ, कम स्वादको साथ। अभिवादन, कार्मेन।
त्यसो भए म यो मायालु साथ राम्रो बनाउनेछु, तुरुन्त जवाफ दिँदा धेरै धन्यवाद, चुम्बन।
तपाईलाई स्वागत छ, कार्मेन। तपाईं कसरी मलाई बताउनुहुन्छ। शुभकामना।
धेरै राम्रो, मेरो पूरै परिवारले यो मन पराए, म निश्चित छु कि म यसलाई अर्को जन्मदिनको लागि दोहोर्याउनेछु।
तपाईलाई मन परेकोमा खुशी छ, कारमेन! शुभकामना।
हिजो मैले यो केक बनाएको थिएँ र आज हामी यसको स्वाद लिन्छौं, र यो यस्तो देखिन्छ ... तर यसलाई बनाउँदा मलाई शंका थियो, पहिलो चरणमा गोरेहरू भेला हुनु पर्छ कि? मैले रेसिपी अनुसरण गरें र उनीहरू भेला भएनन्, र मेरी आमाले मलाई चिनाउन शुरूबाट चीनीलाई सँगै मिलाएर गोरा कि सँगै भेला भएन भने, ती भेला भएपछि चिनी मिलाउनुपर्नेछ। के यो यस्तै हो? धन्यबाद
नमस्ते मारी, तिनीहरूले मलाई महसुस गर्छन् जब म यो जस्तै गर्दछु, तर कसरी तपाईंको आमाले यो उत्तम गर्दछ। गोरा माउन्ट गर्ने अर्को तरिका उनीहरूलाई पहिले माउन्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि चिनी थप्नुहोस्। शुभकामना।
नमस्कार, म यो केकलाई जन्मदिनको लागि तयार पार्न चाहन्छु तर मैले यसलाई २-27-२29 सेमी मोल्डमा बनाउने सोचें। आयताकार जुन मसँग छ किनकि धेरै पाहुनाहरू आउँछन्, के तपाईंलाई थाहा छ रकमहरू दोब्बर गर्न सकिन्छ कि? यो २ केकहरू बनाउनुबाट जोगिनु हो।
Ch चकलेट्स केक र चीज केकको साथ मैले यसलाई बनाएको छु र तिनीहरू उत्तम बाहिर आउँछन् तर यो तभन भइरहेको छ मलाई विश्वास छैन
मग्दालेना, मलाई लाग्छ कि तपाईलाई रकम डबल गर्नमा कुनै समस्या छैन। तपाईंले ओभन पेन्डि say गर्नुहुँदा तपाईंले हिंड्नु पर्छ, तर पक्कै पनि यो विलासी हुनेछ।
नमस्ते, भोलि मैले खाना खाएको छु र म केक बनाउन लागिरहेको छु तर मसँग प्रश्न छ, मोल्ड २२ सेमी हुनु पर्छ? मसँग एक २ 22 छ र म डराउँछु कि म एकदमै कम हुनेछु। के तिमी मलाई केही भन्न सक्छौ? धन्यवाद
नमस्ते प्याट्रसिया, यदि यो २२ छ भने राम्रो छ, तपाईले भनेको जस्तै हो, मोल्ड ठूलो छ, केक कम छ।
सिरप संग "calar" के हो? मैले कति सिरप थप्ने?
calar केक भिजाउनु हो। तपाईले के गर्नु पर्छ चिसो सिरपको साथ किचन ब्रशको साथ आधार केक "रंग" गर्नुहोस्। तपाईंले सही ड्राफ्ट पोइन्ट प्राप्त गर्न अभ्यास गर्नुपर्छ, तर यदि यसले तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न मद्दत गर्दछ भने, यसलाई ब्रश गर्नुहोस्, जबसम्म, तपाईंको औंलाले थिचेर, तपाईंले यो "रसीला" भएको देख्नुहुन्छ, धेरै सुख्खा वा भिजेको छैन।
Currada मा जानुहोस् र पिन्ट जानुहोस् !!!
म यो बनाउँदैछु, तर गोरेहरू टुक्रा-टुक्रा गरीएको छ जब म चकलेटको साथ आटा प्रयोग गर्न जान्छु, म यसलाई यसको शुरुवाती बनावटमा फिर्ता राख्छु, र जब मैले कट्टलफिसलाई समावेश गर्दछु, यो फेरि आधा पूर्ववत हुन्छ, एक प्रकारको छोडिन्छ। पहेलो चीज फ्लोटिंग को। तैपनि मैले यसलाई मिस्यौं र यो ओभनमा छ। यसले गन्धका केही भागको सुगन्ध लियो..जेज्जे र मैले ओभनको भुइँ तल लियो ... हामी के हुन्छ हेर्नेछौं !!! म तिमीलाई यसको बारेमा बताउँछु। धन्यवाद र आदरणीय
अनुस्कीलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले यो बनाएको छु र यसको स्वाद एकदमै राम्रो छ तर मलाई श doubt्का छ कि केक पनि बढेको छैन। मैले बिस्तारै गरेको हुनाले किनकि म यो राम्रोसँग गर्न चाहान्छु र शान्त भएपछि, जब म राखिएको गोरालाई मिक्स गर्न गएँ, तिनीहरू पहिले नै अलि परिसकेका थिए, के यसले प्रभाव पार्छ? के मैले केही विशेष पिठो प्रयोग गर्नु पर्छ ??? मैले २ 26 सेमी मोल्डमा गरेको थिएँ, के मैले सानो प्रयोग गर्नुपर्नेछ ???
पृष्ठको लागि धेरै धन्यबाद। चियर्स,
Gymo लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार जिमो, गोरोहरुका लागि तल झर्नु सामान्य हो, त्यसैले जब हामी यसलाई मिल्छौं हामीले यसलाई धेरै होशियारी गर्नुपर्दछ। कुनै विशेष आटा आवश्यक छैन, त्यसैले अर्को पटक तपाईं अग्लो केकको लागि सानो प्यान प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो पकाउनको पहिलो २० मिनेटमा ओभन नखोल्न महत्वपूर्ण छ, हैन?
नमस्ते, म केक बनाउन गइरहेको छु र म यो चिनीको सट्टा फ्रुक्टोजको साथ बनाउन सकिन्छ कि भनेर जान्न चाहान्छु ... के यो समान हुनेछ? धन्यवाद र अभिवादन
हो क्रिस्टिना, कुनै समस्या छैन। अवश्य पनि, राशि तपाईले निर्माताले सुझाव गर्नु भएको बराबरहरूको पालना गर्नुपर्नेछ।
नमस्कार, मैले तपाईंको केक देखेको छु र मसँग एउटा प्रश्न छ, मेरो श्रीमान ल्याक्टोज असहिष्णु हुनुहुन्छ, चकलेट पहिले नै चिनी बिना नै अवस्थित छ, तर मेरो प्रश्न यो छ कि यदि तपाईंले सूर्यफ्लावर तेलको लागि बटर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, के यो पनि धनी हुनेछ? अभिवादन
माफ गर्नुहोस्, म यो भन्न चाहान्छु कि मैले पहिले नै दूधको ट्रेस बिना नै चकलेट अवस्थित गरेको छु !!!
मसँग पहिले नै सबै सामग्रीहरू र एक प्रश्न छ, जब म ओभनलाई १ heat०º मा तातो गर्छु, के म यसमा फ्यान राख्छु वा गर्दैन ??? त्यहाँ धेरै रेसिपीहरू छन् जुन यो निर्दिष्ट गरिएको छ र म तपाईलाई अपलोड गर्न चाहानु भएको अपलोड गर्न चाहान्छु।
हाई टाटियाना, म सँधै फ्यानले केक बेक गर्दछु, त्यसैले यो बढ्दो रूपमा देखा पर्दछ किनभने तातो राम्रोसँग वितरित गरिएको छ। निस्सन्देह, यदि तपाई यो देख्नुहुन्छ कि यो अधिक मा माथि ब्राउनिंग छ (र यसलाई अझै पनी समय छ) यसमा अल्बल पेपरको पाना राख्नुहोस् र यस तरीकाले यो भित्रबाट भइरहेको समाप्त हुन्छ र यसले तपाईलाई जलाउँदैन। भाग्यमानी!
नमस्कार, जब तपाइँ केकलाई सोख भन्नुहुन्छ, यो ठीक के हो? के म यसलाई ब्रशले भिजाउँछु वा केकलाई भिजाउँछु?
केक भिज्नका लागि, म तपाईलाई ब्रश प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छु, त्यसैले सिरप अधिक वितरण हुन्छ र केकले अलि अलि अवशोषित गर्दछ।
तर होशियार रहनुहोस् कि यदि तपाईंले यसलाई धेरै भिजाउनुहुन्छ भने यो टुक्रि upमा समाप्त हुन्छ!
नमस्कार! मसँग एउटा प्रश्न छ, के यो केक हटाउन सकिने मोडल बिना नै बनाउन सकिन्छ?
हो, तपाईं यो गर्न सक्नुहुनेछ, तर यदि तपाईं यसलाई अनमल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने, प्रस्तुति यति राम्रो हुनेछैन। कुनै समस्या छैन, तपाईं कुनै पनि मोल्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले हामीलाई भन्नुहुनेछ!
एलेना गीजर भन्यो
तपाईं के संग गीत गर्नुहुन्छ? जब यो दुईमा विच्छेद हुन्छ, केही ट्रिक ताकि यो भाँच्दछ र यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न। धन्यबाद
एलेना गीजरलाई जवाफ दिनुहोस्
केक काट्ने क्रममा तपाईं या त पेस्ट्री स्रे वा चक्कु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले आरा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईंले अलि अलि काटेको देख्नु पर्नेछ र सँधै समान दबाब प्रयोग गर्दै जानुहुन्छ ताकि कुनै कदमहरू नपर्न। यदि तपाईं राम्रो चक्कु प्रयोग गर्नुहुन्छ जुन सेरिएको छ र त्यो केकको व्यास भन्दा ठूलो छ।
यसलाई सार्नको लागि ताकि यो विच्छेद नगर, यो एक पेस्ट्री फाल्दा प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ, यद्यपि तपाईं एक पातलो काट्ने बोर्ड पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
अक्षरहरू क्रीमको साथ बनेका छन्, यसको लागि तपाईंले थोरै नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। म के गर्दछ बेकिंग कागजमा चकलेटमा अक्षरहरू हुन्छन्, जब ती कठोर हुन्छन् म सावधानीपूर्वक त्यसलाई काट्छु र तिनीहरूलाई केकको माथि राख्छु। त्यसोभए यदि ती मध्ये एक कुरूप निक्लिएको छ, म त्यसलाई फेरि दोहोर्‍याउँछु र यसले सम्पूर्ण वाक्यलाई बिगार्दैन।
पाक्विटा मार्सल भन्यो
के तपाई मलाई बताउन सक्नुहुनेछ कि म कसरी चकलेट कोटिंगमा स्याचर केकलाई पेस्ट्री जस्तै चम्किलो बनाउन सक्छु?
पकिटा मार्सललाई जवाफ दिनुहोस्
मारिया जुलिया भन्यो
कोग्नाकको सट्टामा तपाई के थप्न सक्नुहुन्छ? यो बच्चाहरूको जन्मदिनको लागि हो
मारिया जुलियालाई जवाफ दिनुहोस्
कोड क्रुम्ब्सको साथ आलु